Hamba uye edolobheni lase-Asheville usuka kule-studio se-chic! - I-Airbnb
Hamba uye edolobheni lase-Asheville usuka kule-studio se-chic!
Indlwana ilungiswe kabusha ngokuphelele futhi i-studio esezansi ikulungele ukukwamukela! Itholakala emgwaqweni othulile onezihlahla ezinhle. Jabulela ikhofi lasekuseni noma ingilazi yewayini kuvulande omboziwe obheke igceke elinotshani. Hamba ibhuloho elingu-1 edolobheni ukuze udle kwenye yezindawo zokudlela ezingaphezu kuka-60 futhi ujabulele ama-studio obuciko, izindawo zokwenza utshwala, izindawo zekhonsathi nemikhosi!
Ikhishi le-gourmet linakho konke okudingekayo ngezinto zikagesi ezintsha eziyinsimbi engagqwali kanye namatafula amahle ensipho. Ikamelo lokulala libungaza umbhede omusha omkhulu onamashidi okunethezeka, ungene ku-Smart TV eseduze futhi enkulu. Ubhavu unengilazi enamathayili eshaweni enamakhawunta amakhulu ensipho kanye nomnyango wesilayidi othakazelisayo. Indawo yokuhlala inosofa omkhulu wehlelo onganikeza indawo yokulala eyengeziwe kanye ne-TV engu-42 inch.
Ukukhanya nokukhanya! Izihlalo zasekhishini ezingu-4 etafuleni lokudlela futhi zinikeza indawo yokuhlala yesitulo sebha esengeziwe. Indawo yonke inendawo ekhanyayo eyenziwe ngokhuni njengamathayili. Kukhona umshini omusha wangaphambili wokuwasha nokomisa ku-closet evalekile. I-AC entsha, ukushisa, i-WiFi, ne-Cable. I-Netflix ne-Hulu iyatholakala kuma-TV ngokufinyelela kwe-akhawunti yakho.
Jabulela i-The River Arts District yamasiko, umculo, ubuciko nokudla! Uhambo lwe-Biltmore Estate, thatha uhambo lwedolobha lase-LaZoom, uhambo lokubuka indawo eyenza utshwala, noma uqwale i-Blue Ridge Parkway. I-Trader Joe 's, i-Retreats Foods, i-Harris Teeter, ne-Starbucks kuseduze kakhulu!